टुकी प्रत्यक्ष घटना भाडे - टुकी दिन
ज्ञान सबैभन्दा शक्तिशाली भेला कल्पना एकल कोठा मा पत्ता लगाउन सक्षम छौँ.
त्यो तपाईं जानुहोस् जब तपाईं प्राप्त के टुकी प्रत्यक्ष अधिवेशन भाडे.
को timespan मा3दिन, 17 सबैभन्दा चिन्न अनुहारहरू को टुकी व्यापार सँगै संग प्राप्त 3,000 मानिस र आफ्नो व्यापार रहस्य जान्न चाहने छन् महिला.
घटनाको 2018 कि सेकेन्ड कुरा मा उपस्थित बेच कुल रेकर्ड ब्रेकर थियो.
को बाहिर 52,000 सक्रिय सोली विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता, एउटा सानो अंश साँचो पेशावरहरूसँग भाग मिल्यो.
तपाईं बाहिर बायाँ गर्न चाहनुहुन्छ भने, अर्को वर्ष घटना लागि चित्रमाला हुन.
यसलाई पहिले नै घोषणा भइरहेको गर्नुपर्छ!